Kulanka Crackers, xisbiga aheen, Rashka Cold, Stage Rashka - Wanfu
Gano iyo madaafiic
Waa maxay sababta aad doorato
Waxaan leenahay waayo-aragnimo in wax soo saarka dalalka badan oo kala duwan. Dhammaan alaabta aannu la sameeyey waafaqaan calanka caga sida AFSL HEERKA iyo XEERARKA CPSC American, BS7114, EN15947.
Ka hor inta shixnad, waxaan fuliyaan nidaamka tayada adag: Laga soo bilaabo diyaarinta qalabka si ay u cabayn ee la soo dhaafay galay kartoonka. Waxaan habraaca kasta hubin doontaa in ay ka fogaadaan dhibaatooyinka iyo isku day si loo hubiyo tayada sare leh.
Waxaan leenahay warshadood oo noo gaar ah. laakiin sida qof walba ogyahay, rashka uu leeyahay wax soo saarka badan oo kala duwan. Sidaas awgeed, waxaan u baahan tahay ganacsiga qaar ka mid ah ka warshadood oo kale. Laakiin, waxaan dooran doonaa warshadaha wanaagsan oo calan kor u our group il wanaagsan.
Shaqaale tababaran waa barta ugu muhiimsan.
shaqaalaha waa si wanaagsan loo tababaray oo si fiican aad la xidhiidhi karto si looga baahan yahay in aad la gabi ahaanba fahmi karaa oo aan wax unu sababay oo ka dhigi doonaa amro rashka aad waayo-aragnimo fudud ah oo qurux badan.
Hadafkayagu waa in ay sii wadaan si ay u horumariyaan waxyaabaha cusub ee suuqa adduunka oo dhan, oo waxaan u gacangelinayaa idiin la qiimaha tayada iyo inta badan tartan ugu sareeya.
Liuyang Wanfu Rashka Co., Ltd. waa rashka saaraha xirfadeed iyo dhoofinta, oo ku yaalla Liuyang, Shiinaha. Waxaan leenahay laba rashka warshadaha iyo mid warshad daabacaadda xirxirida. The warshadaha rashka wax ka badan 15 sano oo waayo-aragnimo soo saara. Waxaan kor koox fiican ka alaabta soo koraya, naqshadaynta, daabacaadda, soo saara dhigay, in tayada, kaydinta iyo selling.We inta badan soo saaraan iyo iibiyo noocyada kala duwan ee rashka, sida bandhigay iyo macaamiisha kibis, darbo Magic, shumac Roman, spinners Ground, diyaaradaha qumaatiga u kaca, rashka Toy, ilaha, qolof madaafiicda, shumac Dhalashada, qiiqa lahayn rashka marxalad ...
More Us About
LIUYANG WANFU rashka CO., LTD.
LIUYANG WANFU dhoofinta rashka warshad
LIUYANG HEXIE daabacaadda xirxirida warshad
Add Office: 5f, Block C1, New Moon Peninsular, Jiangjun Road, Liuyang, Hunan, Shiinaha
Ku dar Factory1: Qucheng Village, Chengtanjiang Town, Liuyang, Hunan, Shiinaha
Ku dar Factory2: Hehua Degmada Warshadaha, Yangjianong, Liuyang, Hunan, Shiinaha
FAAKIS: + 86-731-83821288
Magaca Mob Email